Maxaad ka taqaanaa Halloween? | Somaliska
Maxaad ka taqaanaa Halloween?
Maanta oo ay taariikhdu tahay 31 Oktobar waxay dad badan oo ku nool wadankaan u dabaaldagaan wax loo yaqaano Halloween. Waxaan filayaa in aad aragteen caruur si cabsileh u labisan oo wadooyinka lugeynaya. Hadaba su’aashu waxay tahay horta waa maxay Halloween?
Halloween waa waqti ay dadku sameeyaan qiyaanooyin kala duwan sida in lays cabsi galiyo, filimaan cabsi leh oo la daawado iyo iwm. Waxaan ku bilaabeynaa taariikhda dhacdadaan oo soo jirtay mudo kumanaan sano ah. Dhacdadaan ayaa ku bilaabatay dabaal deg loo yaqaano Samhain kaasoo loogu dabaal daggi jiray bilowga jiilaalka isla markaana ahayd bilowga sanadka dadkii cawaanta ahaa ee ku noolaa wadamada Ingiriiska iyo Ireland.
Waqtigaan ayaa dadku aaminsanaayeen in ay isku milmaan nafsada baniaadamka iyo mida ilaahyadooda. Waxay aaminsanaayeen in waqtigaas dabaaldega in ay dhulka soo booqan jireen dadkii horey u geeriyooday oo ka kala yimid caalamyo kala duwan. Waxay kale oo u dabaaldaji jireen isla waqtigaas ilaaha qoraxda iyo kan dadka dhintay. Waxaa loo mahdin jiray ilaaha qoraxda in uu ka difaaco qabowga jiilaalka.
Sidoo kale waxay aaminsanaayeen in ilaaha dhimashada uu soo aruuriyo dhamaan dadkii dhintay 31 oktobar oo uu ka dhigo xayawaano. Markii diinta Kiristaanku ay soo gaadhay dhulkii ay ku noolaayeen dadkaas cawaanta ah ayay isku dayeen Kiristaankii in ay meesha ka saaraan ciidaan ay sameynjireen dadka cawaanta ah. Waxay sameeyeen ciid kale oo iyaduna ku beegan isla waqtigaas. Ugu dambeyntii waxaa dhacday in ay isku milmaan ciidii cawaanta iyo midii kiristaanka oo ay halkaas ka dhalato waxa maanta loo yaqaan Halloween.
Waxyaabaha ay sameeyaan dadku xiliga Halloweenka waxaa ka mid ah. Khayaanooyinka sida dariska oo laga nixiyo. Waxaa kale oo la isticmaalaa sawirada xayawaanka Kibiliga iyo bisada oo ay aaminsanaayeen in ay la xiriiri karaan dadka dhintay. Waxaa kale oo ka mid ah ciyaaro la sameeyo qaasatan xafladaha caruurta kuwaasoo asalkoodu ka soo jeedo ciyaarihii ay sameyn jireen cawaantu si ay u qiyaasaan mustaqbalka.
Haddii aan eegno dhinaca diinta Islaamka iyo waxay ka qabto arimaha nuucaan ah ayay tahay mid iska cad in waxyaabaha la sameeyo dhacdadaan ay yihiin ficilo shirki ku dhisan taasna waa ognahay booska ay ka joogto diinta Islaamka. Dad badan ayaa ka qeyb qaata dhacdadaan iyaga oo aan wax fikrad ah ka haysan taariikhda iyo macnaha ka dambeeya. Hadaba waalidka Muslimka ah ayaa laga doonayaa in uu caruurtiisa ka weeciyo dhacdooyinka nuucaan ah.
Gabar Soomaali ah oo qatar ugu jirta in laga musaafuriyo Sweden
WAR DEG DEG AH: Qaraxyo kala duwan oo magaaladda Malmö goor dhow laga maqlay
Ururka isbahaysiga jaaliyadaha Soomaalida oo la siiyay 2 milyan oo karoon
October 31, 2014 at 11:04
waa ku mahadsan thy ilaahay ajar ha kaa siiyo
Fikrad lala dhacay 18 2
October 31, 2014 at 13:54
Run ahanti waa arin khatarteda leh loona bahan yahay in dadka lagu bararujiyo, waayo waxa jira walidin badan oo an fahansanaynba macnaha Halloween. Adnna waad ku mahadsantahay.
October 31, 2014 at 17:08
waa arin fiican oo dadka an ka warqabin ku baraa rugi karaan
October 31, 2014 at 22:11
asc waxaa now sheegtay wax badan ow aana fahan saneyn waxana ka faa iidnay wax aan tira leheen badan. wana wax lagu farxo inaan helno dad now sow tabsho warar cusub ow faa iido now leh jimcale dadaal aya ku jirtaa ilaahey ha,ku ku karabkalo
November 1, 2014 at 10:44
Asc marka hore illahayba Mahad iska leh ka bacdi aad ban jimcale kugu mahad naqaya wad no faaiidayse alle haku barakeyo
October 31, 2015 at 16:49
Ilaaha macbuudka aa mahad leh awalan mida labaad wiilka wabkaan leh waa halyeey somaaliyeed oo markasta is ku taxalujiya maxayna dadkaagu ogeyn waxaan leeyahay guuleeso jimcaale iyo saaxiibadiis
October 31, 2015 at 20:20
100% carruurta ineey u raaxeyaan, ayagana iska nafisaan ayee ugu talo galeen halowiinka ee kama aha wax dabaaldag ah ama dhaqan diimeed.
Hassan adde says:
October 31, 2015 at 20:38
ha la is ilaaliyo he asxaabta yaa la is ku nixin sarirtana yaa lga sodhicin hhhh